Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa Group sy BASF manala ny haitao antsantsa
Mampiasa ny natiora ho modely, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nikaroka fatratra ny fomba hampihenana ny fitarihana aerodynamika nandritra ny taona maro
Lufthansa Technik sy ny BASF dia nahomby tamin'ny fanaovana ilay fandrosoana ho ampahany amin'ny tetikasa iraisana
AeroSHARK dia sarimihetsika ambonin'ny tany izay maka tahaka ny firafitry ny hoditry ny antsantsa
AeroSHARK dia havoakin'ny fiaramanidina mpitatitra entana manontolo an'i Lufthansa Cargo amin'ny 2022
Ny fihenan'ny fanoherana ny fiaramanidina amin'ny rivotra no mampihena ny fanjifana solika. Ny fampiasana ny natiora ho modely, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nikaroka fatratra ny fomba hampihenana ny fitarihana aerodynamika nandritra ny taona maro. ankehitriny Lufthansa Technik ary BASF nahomby tamin'ny fanaovana ny fandrosoana ho ampahany amin'ny tetikasa iraisana. AeroSHARK, sarimihetsika ambonin'ny tany izay maka tahaka ny firafitry ny hoditry ny antsantsa iray, dia tokony ahodina amin'ny fiaramanidin'ny mpitatitra entana rehetra an'ny Lufthansa Cargo hatramin'ny fiandohan'ny taona 2022, mahatonga ny fiaramanidina ho ara-toekarena kokoa ary hampihena ny entona.
Ny firafitry ny tampon-kavoana misy tadiny mirefy manodidina ny 50 micrometers dia maka tahaka ny fananan'ny hoditra antsantsa ary manatsara ny aerodynamika amin'ny ampahany mifandraika amin'ny fikorianan'ny fiaramanidina. Midika izany fa kely ny solika ilaina amin'ny ankapobeny. Ho an'ireo mpitatitra entana an'ny Boeing 777F an'ny Lufthansa Cargo dia nanombana ny fihenan'ny dragona mihoatra ny iray isan-jato i Lufthansa Technik. Ho an'ny fiaramanidina folo manontolo, izany dia mahatratra 3,700 taonina isan-taona ny tahirin-tsolika ary eo ambanin'ny 11,700 2 metatra ny emissions CO48, izay mitovy amin'ny sidina mpitatitra entana XNUMX avy any Frankfurt mankany Shanghai.
"Ny andraikitra amin'ny tontolo iainana sy ny fiaraha-monina dia lohahevitra stratejika lehibe ho anay," hoy i Christina Foerster, mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG izay tompon'andraikitra amin'ny fitohanana. “Nandray anjara mavitrika hatrany izahay tamin'ny fampidirana ireo teknolojia tia tontolo iainana. Ny haitao vaovao antsantsa ho an'ny fiaramanidina dia mampiseho izay mpiara-miombon'antoka matanjaka sy manavao be afaka mahatratra ny tontolo iainana. Hanampy antsika hahatratra ny tanjontsika ny tsy fitongilanana amin'ny toetrandro amin'ny 2050. ”
“Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia miatrika fanamby mitovy amin'ny indostrian'ny simika: ny fandrosoana mitohy dia tsy maintsy atao amin'ny fiarovana ny toetrandro na eo aza ny angovo ilaina amin'ny angovo. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky sy amin'ny fomba mahomby amin'ny fampifangaroana ny fahalalantsika amin'ny famolavolana sy ny aerodynamika ambonimbony, dia nahavita nanao dingana lehibe mandroso isika. Ity dia ohatra iray tsara indrindra amin'ny faharetana amin'ny fampiharana, tratra tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa mifototra amin'ny fiaraha-miasa sy ny teknolojia vaovao, "hoy ny Dr. Markus Kamieth, mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny BASF.
"Faly izahay fa afaka mampandeha ny fiaramanidina mpitatitra entana manontolo ankehitriny amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny ho avy noho ny haitao antsantsa ary mampihena ny dian-tongan'ny karbaona an-tsambo ankehitriny. Ny fampiasam-bola nataonay tamin'ny famoahana ny AeroSHARK tao amin'ny Lufthansa Cargo dia manamafy hatrany ny fahavononantsika hitondra ny tanjona fampandrosoana maharitra an'ny Firenena Mikambana momba ny hetsika ara-toetrandro, "hoy ny fanazavany.
Dorothea von Boxberg, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Lufthansa Cargo AG.